घर एशियाई-ओशियनियन फुटबल स्टोरीहरू ओसिनिया फुटबल खेलाडीहरू क्रिस वुड बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
क्रिस वुडको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा हामी तपाईंलाई फुटबल जीनियसको इतिहास दिन्छौं जुन उपनामको रूपमा परिचित छ।वुडी“। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिन देखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भयो। तपाइँलाई क्रिस वुडको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवनको चित्रण सारांश छ।
क्रिस वुडको जीवन र उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उहाँ गोल गर्न को लागी आँखाको साथ एक रोमांचक स्ट्राइकर हुनुहुन्छ। यद्यपि क्रिस वुडको जीवनीलाई मात्र केहिले विचार गर्छन् जुन अत्यन्त चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
क्रिस वुड बचपन कहानी - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि:
सुरूवात गरेर, उनका पूरा नाम क्रिस्टोफर ग्रान्ट वुड हुन्। क्रिस वुडको जन्म डिसेम्बर7को 1991th दिनमा उनको आमा जुली वुड र बुबा, ग्रान्ड वुडको लागि अक्ल्यान्डमा भएको थियो, जुन न्युजील्याण्डको उत्तरी टापुको एउटा शहर हो। ऊ दोस्रो बच्चा र आमाको पहिलो छोराको रूपमा जन्मेको थियो।
क्रिस वुड आमा र ग्रान्ड्याड
क्रिस वुड एक मसीही घर मा सैनिक जरा र एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमि स्थिति संग जन्म भएको थियो। माथि वर्णन गरिएको उनको हजुरआमा आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा अघि अवकाशप्राप्त सैन्य अधिकारी थिए। ऊ आफ्नी जेठी बहिनी चेल्सी वुडको साथ हुर्कियो जो उनीजस्तै एक कुशल फुटबलर पनि बन्छ।
क्रिस वुड बचपन कहानी शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप:
दुबै भाई र ठूली दिदी घरमा हुँदा सधैं एक अर्काको बिरूद्ध खेल्थे। क्रिसलाई उनका आमाबुवाले उनको बहिनीलाई वनहंगा स्पोर्ट्समा सम्मिलित गर्न प्रोत्साहित गरे, जहाँ उनले टीम खेलको आनन्द लिन सिके।
अझ बढी जान्न उत्सुक हुँदै, क्रिस र तिनकी बहिनी दुबै पूर्व अ White्ग ह्वाइट विन्टन रुफरले स्थापना गरेको अकल्याण्डको अक्ल्यान्डमा आधारित एकेडेमी विकरमा फुटबल शिक्षा हासिल गर्न अघि बढे। यो वाइन्र्समा थियो क्रिस वुडले आफ्नो प्रविधिको विकास गर्‍यो र फुटबल परीक्षणहरूमा भाग लिनको लागि तयार थियो।
क्रिस वुड बचपन कहानी - प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
११ बर्षको उमेरमा, वुड परिवारले न्यूजल्याण्डको अकल्याण्ड शहर छोडे र ह्यामिल्टनको २ 11 किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा रहेको केम्ब्रिजको वाइकाटो ग्रामीण शहरमा बसाई सरे। शहर उनको परिवार बसाई "क्याम्ब्रिज"भनेर चिनिन्छ"रूखहरू र च्याम्पियन्सको शहर“। त्यहाँ छँदा, क्रिस र तिनकी बहिनी सेन्ट पल कलेजिएट स्कूल गए।
क्रिस आफ्नो क्यारियर जारी राख्नका लागि धेरै उत्साही भए जहाँ उनले यो छोडे। फुटबलको लागि उसको उत्कटताले उनलाई परीक्षणहरू पार गर्दै र स्थानीय क्लब- क्याम्ब्रिज एफसीको साथ जुनियर फुटबल खेल्न दर्ता गरेको देख्यो। तल सानो क्रिस र उसको टीमका साथीहरूको फोटो छ।
क्रिस वुड (मध्य प row्क्तिको चरम बाँयामा चित्रित) - क्याम्ब्रिज एफसी एकेडेमीको साथ उसको शुरुआती वर्षहरू।
यस अनुसार क्याम्ब्रिज एफसी वेबसाइट, जब क्रिस वुड एक्सएनयूएमएक्स थिए, ऊ पहिले नै ठूलो इकाई थियो- जसमा ऊ मोटा र बलियो थियो। त्यो उमेरमा, जवान वरिष्ठ फुटबल खेल्नको लागि तयार थियो।
क्रिस वुड अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम टु फेम:
त्यतिखेर क्याम्ब्रिज एफसी सदस्य केन हबरन, वुड परिवारका साथी साथीले आफ्नो पहिलो वरिष्ठ टोलीमा उपस्थित हुन पाउँदा खुसी थिए। तपाईंलाई थाँहा थियो?… केनले क्रिस वुडलाई वचन दिए $ 100 यदि उसले गोल गर्न सक्थ्यो भने लक्ष्य थाहा नभएको केही बेर पछि आफ्नो दाग बाट टाढा थियो।
क्रिसले एक विकल्पको रूपमा खेल प्रवेश गर्‍यो र उनको पहिलो उत्सवमा गोल गरेपछि गोलको उत्सवमा औंलाको सँगै रमाइलो समावेश थियो। यस उपलब्धीले प्रशंसकहरू र उसको परिवारका सबै सदस्यहरूलाई आनन्दित तुल्यायो।
अर्को सीजन स्थानीय प्रतिद्वन्द्वी हेमिल्टन वान्डरर्सको जादू पछि, क्रिस वुडले एएसबी प्रिमियरशिप क्लब वाइकाटो एफसीको ध्यान आकर्षित गरे जसले उनलाई एक्सएनयूएमएक्समा प्राप्त गरे। उनी क्लबमा सामेल भए पनि वुडले युरोपका धेरै उल्लेखनीय क्लबहरूले अनुगमन गरे जसले आफ्नो हस्ताक्षरको लागि भीख माग्दै थिए। क्लबसँग 2007 खेलहरू खेल्दा, क्रिस वुड इ्लिश क्लब, वेस्ट ब्रोमबाट खोसियो।
क्रिस वुड बायो - प्रसिद्धि गर्नका लागि:
कोच रोजर विल्किन्सनले वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन एकेडेमीमा वुडलाई सिफारिस गरेका थिए, जसले उडान उजाड रंगमा पार गरेको उनको लागि एउटा परीक्षण स्थापित गरे। एकेडेमीमा हुँदा, क्रिस वुड वेस्ट ब्रोम युवा एकेडेमी पक्ष को लागी गोल स्कोरिंग फारम को एक समृद्ध शिरा फेला, एक यस्तो उपलब्धि जसले उनको प्रशिक्षक उनको वरिष्ठ टीम इच्छा सूची मा राख्न बाध्य।
अप्रिलमा 2009 चोटपटक धेरै वेस्ट ब्रोमका खेलाडीहरूले वेडलाई आश्चर्यचकित कल वेस्ट ब्रोम पहिलो टोलीमा हस्तान्तरण गरेको देखे। उनी प्रीमियर लिगमा खेल्ने पाँचौं न्यूजील्यान्ड बन्न बेन्चबाट आए। इ England्ल्याण्डमा हुँदा उनले loanणको चालमा नम्र भई आफ्नो प्रशिक्षुताको सेवा गरे, byतुमा कडा हुँदै र प्रत्येक कोचबाट सकेसम्म सकेसम्म शोषण गरे।
लेखनको समयसम्म अगाडि बढ्ने, वुड हाल इ English्ग्लेश क्लब फुटबलका लागि अनुभवी स्ट्राइकरको रूपमा मान्यता प्राप्त छ, उसले खेलेको सबै क्लबहरूमा १०० भन्दा बढी गोलहरू दर्ता गरेको छ। F फिट stri स्ट्राइकर जो बर्नले एफसीको उप-कप्तान हुन् लेखनको समयमा हाल क्लबको आध्यात्मिक नेतासँग ठूलो साझेदारीको आनन्द लिन्छ एशले बार्न्स.
क्रिस वुड प्रसिद्धि गर्न को लागी।
क्रिस्टी लिनेट, क्रिस वुडको प्रेमीको बारेमा:
उनको ख्याति वृद्धि संग, यो निश्चित छ कि अधिकांश Burnley र न्यूजीलैंड फुटबल प्रशंसकहरु क्रिस वुड प्रेमिका वा पत्नी को हुन सक्छ मा चिन्ता गरेको हुनुपर्छ। सत्य भन! त्यहाँ कुनै तथ्यहरु लाई इन्कार गरीरहेको छैन कि उसको प्यारो हेराईले उनलाई केहि महिला प्रशंसकहरुलाई प्रिय बनाउँदैन।
जहाँसम्म, सफल न्यूजल्यान्डको पछाडि, क्रिस्टी लिनेटको सुन्दर व्यक्तिमा एक ग्लैमरस प्रेमिका छ। क्रिस वुडको सुन्दर प्रेमिका तल उसको मान्छेसँग एल्डरली एज, चेशाइरको कफि शपमा चित्रित छ। दुबै प्रेमीहरूले जुलाई 14 को 2015th दिनमा डेटि began गर्न थाले।
भेटिस क्रिस वुड वाइफ- कर्स्टी लिनेट।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… क्रिस वुडको सुन्दर प्रेमिका पनि एक पेशेवर फुटबलर हो। लेख्ने समयमा, उनी लिभरपूल र इ England्ल्यान्ड अन्तर्गत 23 अन्तर्राष्ट्रिय टीम खेल्छन्। तल उनको क्लब लिभरपुलसँग कार्यमा क्रिस्टी लिनेटको फोटो छ, किनकि उनले एक विपक्षीलाई लिन्छिन्।
लिभरपूलको लागि क्रिस्टी लिनेट।
दुबै प्रेमी र प्रेमिका दुवैले एक अर्कालाई क्यारियर मार्गमा गर्व गर्छन्। Kirsty अनुसार ... 'ठूलो हुँदा हामी पछाडि फर्केर हेर्नेछौं र भन्छौं कि हामी दुबै हाम्रो लागि बाँचेका थियौं सपनाहरु,'
दुबै जोडीको लागि कस्तो हो, पेशेवर फुटबलरहरूको रूपमा डेटि:: दुबै लिननेट र काठका लागि, “फुटबल सधैं पहिलो हुन्छ“। उनी स्वीकार्छिन् कि एक जोडीको रूपमा उनीहरू कहिलेकाँही खेलको पछि एक अर्काको प्रदर्शनमा कठोर हुन्छन्। दुबै लिनेट र क्रिस दुबै रिमोट कन्ट्रोलको बारेमा तर्क गर्दैनन् किनकि फुटबल जहिले घरमै टेलिभिजनको साथ हुन्छ।
यो अझै केही प्रशंसकहरूलाई आश्चर्यजनक छ कि दुबै वुड र लिनेटले लेखेको समयमा विवाह गरेका छैनन्। जहाँसम्म, दुबैले तिनीहरूको जीवनको मजा लिदै न्याय गर्दै, यो निश्चित छ कि तिनीहरूको विवाह अर्को औपचारिक चरण हुन सक्छ।
क्रिस वुड र कर्स्टी लिनेट - फुटबलको सर्वश्रेष्ठ पेशेवर फुटबल जोडी
क्रिस वुड व्यक्तिगत जीवन:
क्रिस वुड पर्सनल लाइफ तथ्यहरू चिन्नुले तपाईंलाई खेलको पिचबाट बाहिर उसको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
फुटबललाई साथमा, वुडले अन्य खेलहरू पछ्याउँदछन् जस्तै; घोडा दौड, रग्बी संघ, क्रिकेट, बेसबल र नेटबल। ऊ शुटि in र मिक्स डबल्स टेनिसमा भाग लिन मन पराउँदछ।
यहाँ पिच बाहिर क्रिस वुड गतिविधिहरू छन्।
क्रिस वुड व्यक्तिगत जीवनको अतिरिक्त, ऊ त्यस्तो हो जो मिसाई, संचारवादी र रमाइलोको लागि सँधै तयार छ। त्यहाँ गम्भीर, विचारशील र अस्वस्थ हुने थोरै प्रवृत्ति छ किनकि उनीहरू धेरै कामहरू गर्छन्।
क्रिस वुड परिवार जीवन:
क्रिस वुड जो आफ्नो परिवारको रोटी खानेहरूमध्ये एक हुन् जस्तो देखिन्छन् फुटबलको लागि आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि उसको परिवारको आफ्नै बाटो जाली। अब यहाँ उनको परिवारका सदस्यहरु को बारे मा केहि अतिरिक्त जानकारी छ।
क्रिस वुड ड्याड: ग्रान्ट वुड, जसको बारेमा धेरै कम चिनिन्छ क्रिसका बुबा हुन्। उनका छोरा र छोरीलाई वनहंगामा सँगै भाग लिन प्रोत्साहित गरेकोमा उहाँ सराहना गर्नुहुन्छ, जुन उनीहरूको पहिलो क्लब हुन जान्छ। उनकी श्रीमती विपरीत, उहाँ मा एक सानो मीडिया कभरेज छ।
क्रिस वुड आमा: सुन्दर जुली वुड क्रिस 'आमा हो। उनका श्रीमानजस्तो नभई उनले मिडियाबाट टाढा रहन कुनै सचेत प्रयास गरेका छैनन्। तल उनको छोरा क्रिससँग सुन्दर जुलीको फोटो छ किनकि तिनीहरू दुबै एन्जाक दिन उपस्थित थिए जहाँ तिनीहरूले क्रिसको हजुरबासी मनाए।
जुली वुड- क्रिस वुडको आमालाई भेट्नुहोस्।
क्रिस वुड दिदी: अब हामी तपाईलाई चेल्सीको बारेमा अझ बढी कुरा गरौं जो क्रिस वुडको बहिनी हुन् जो उनी जस्तै फुटबल खेल्छन्. चेल्सी चिलीमा २०० U यू २० महिला विश्वकपको क्रममा उनको देश न्यूजीलैंडले अण्डर २० को उमेरका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्‍यो। चेल्सी जर्मनी २०१० यु -२० महिला विश्वकपको हिस्सा पनि थिए। निहितार्थ २०० year मा अण्डर -२० खेल्नुको मतलब उनी आफ्नो दाजुभन्दा ठूली छिन्।
तपाईंलाई थाँहा थियो?…4को उमेरमा चेल्सीले आफ्नो भाइसँग फुटबल खेल्न सुरु गरे। यो समय दुबै आफ्नो अकादमी मा खेल्न शुरू गरेको थिएन।4को 12 को उमेर देखि, क्रिस वुडले उही टिमहरूमा खेले जुन उसको सुन्दर दिदीले चित्रण गरेको छ।
क्रिस वुड दिदी उनको भाइसँग।
क्रिस वुड हजुरबा हजुरआमा: हजुरबा हजुरआमा मध्ये क्रिस वुड आफ्ना हजुरबा हजुरआमाको नजिक हुनुहुन्थ्यो जो ढिलो गर्नुहुन्न तर कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। तल उसको हजुरबाको फोटो छ जसलाई उनी धेरै मन पराउँथे। सम्झनु: वुडको हजुर उहाँ अघि जानु अघि एक अवकाशप्राप्त सैनिक थिए।
वुडको हजुरबासलाई भेट्नुहोस् जो एक पूर्व सैन्य मानिस थिए उनी अघि जानु भन्दा अघि।
क्रिस वुड जीवनशैली:
"यो पशुको गुणस्तर भएको छ !! कार ड्रीम, यो प्रेम!" ती क्रिस वुडका शब्दहरू थिए जुन उनले आफ्नो कारको प्रशंसा गरे, यस्तो उपलब्धि जसले उनको जीवनशैलीमा अझ राम्रो अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ।
क्रिस वुड जीवनशैली कस्तो देखिन्छ।
काठको लागि, dपिचमा व्यावहारिकता र पिचमा रमाईलो बीचको एक्चिडिंग गाह्रो विकल्प छैन। ऊ आफूले मनपर्ने चीजहरूमा आफ्नो फुटबल पैसा खर्च गर्न मन पराउँदछ।
क्रिस वुड अनटोल्ड तथ्यहरू:
तपाईंलाई थाँहा थियो?… जहाँसम्म क्रिस वुड सबैभन्दा सम्मानित नामहरू मध्ये एक हो न्यूजील्याण्ड फुटबल चिन्तित छ। अगाडि यति सम्मानित छ कि उनी न्यूजील्याण्ड प्रोफेशनल फुटबलर संघको एक बोर्ड सदस्य नियुक्त भए।
महिला फुटबलको लागि एक कार्यकर्ता: तपाईले अरू के आशा गर्नुहुन्छ? क्रिस वुडको बहिनी र पत्नी सबै पेशेवर फुटबलर हुन्। उनकी बहिनीले गरेका बलिदानहरू र उनकी प्रेमिका लिनेटले सामना गरेको संघर्षले वुडलाई महिला खेलमा अझ राम्रा परिस्थितिको लागि प्रतिबद्ध वकील बनाएको छ। “यो फुटबल खेल्ने प्रेमिका वा फुटबल खेल्ने बहिनीको बारेमा होइन, यो सही कुरा गर्ने बारे हो। " क्रिस वुड एक पटक अभिभावकलाई भनेको थियो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो क्रिस वुड चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।